Ubhale incwadi ekhuthaza intsha | News24
Ubhale incwadi ekhuthaza intsha
UNks Thembi ‘Shilex’ Shange obhale incwadi ekhuthaza intsha.ISITHOMBE: sithunyelwe
NGEMUVA kokudlula ezimweni ezinzima empilweni yakhe ngesikhathi esakhula uNks Thembi ‘Shilex’ Shange unqume ukuthi abhale incwadi esihloko esithi: A star can never shine wiythout darkness nahlose ngayo ukukhuthaza intsha ukuba ibekezele noma kunzima.
UNks Shange okhulele endaweni yaseSiginqgini e-Edendale utshele i-Echo ukuthi ubone kungcono ukuba abhale le ncwadi ukuze ezokwazi ukukhuthaza intsha ukuthi ingalilahli ithawula.
Uthe lokhu kungezinye zezindlela afuna ukulekelela ngayo intsha ukuba ikwazi ukufeza amaphupho ayo noma kunzima.
“Le ncwadi izokhuthaza kakhulu abantu abasasesikoleni kanjalo nalabo asebekhulile ukuthi bazi ukuthi ayikho into engadluli. Ifundisa ngokubekezela nokungalahli ithawula uma unephupho kuze kube uyayithola lento oyifunayo.
“Abantu kumele bazi ukuthi empilweni kunezimo ezizoba nzima nezizobawisa kodwa uma benephupho kumele bavuke bazithathe baphokophele phambili ukuze bezophumelela,” kubeka yena.
Uqhube wathi incwadi iphinde ibheke ngasohlangothini lwezamabhizini nalapho eluleka khona abantu besifazane ngezamabhizinisi kwazise naye ungusomabhizini.
“Kungithathe iminyaka emibili ukuthi ngiyibhale yonke le ncwadi ngiyiqede, kwazise bengifuna ukugxila ezintweni ezahlukene ezizolekelela intsha ekutheni ikhule yenze nezimpilo zayo zibe ngcono. Ngijabulile kakhulu ukuthi konke kugcine kuba yimpumelelo nencwadi yaphuma. Le ncwadi angiyibhalanga nje kuphela ngoba ngithi ngifuna ukukhuthaza nokweluleka intsha kodwa bengifuna ukushiya into ekuyothi ngisho ngingasekho, kodwa yona ibe khona iqhubeke yenze umsebenzi omuhle wokweluleka intsha iphinde ikhuthaze bese ishintsha izimpilo zabantu,” kubeka yena.
Ngaphandle kokuba umbhali wale ncwadi uNks Shange ungumsunguli wenkamapani yezokumodela nokukhuthaza ebizwa ngokuthi yi-Shilex Trading and Mentoring Company. UNkk Shange uphinde waba ngowesifazane wokuqala ukukhiqiza iziphaqulo neziqholo zakhe ezibizwa nge Shilex Fragrances.